Libiyaa Keessatti Yakka Waraanaa fi Gocha Gara Jabinaatu Gaggeeffame: UN
Onkoloolessa 05, 2021
Faayilii- Loltoota waraana mootummaa Liibiyaa ka Tokkummaa Mootummootaatiin deeggaramanii, Caamsaa 25, 2019
Erga bara 2016 kaasee Libiyaa keessatti yakka waraanaa fi gocha gara jabinaatu dhala namaa irratti rawwatamuu qorannaa Tokkummaan Mootummootaa Wiixata kaleessaa baasee hubachiisee jira. Gama kaaniin ijoollee looltummaa irratti bobbaasuu gaggeeffamaa jira jedhe.
Dhimma Libiyaa keessaa qorachuuf kan hundeeffame gareen walabnii kaawunsilii mirga dhala namaa kan Tokkummaa mootummootaan kan hundeeffame akka jedhutti, godaantonni Awurooppaa dhaqqabuu fedhan bakka itti hidhaman keessatti dararaan akka irra ga'u, kana malees namoota seeraan ala nama deddebisan harkatti akka dararaman ibse.
Yeroo hidhaa keessa turfamanis, haallii achii keessa jiru sukanneessaa fi dararaan kan irra ga’u ta’u ibsee jira. Libiyaa keessatti yakkii waraanaa gaggeeffamuu isaaf amanuu haallii nama dandeesisuu akka jiran, kunis hidhaa keessatti hokkarri gaggeeffamuu keessumaa godaantoota irratti, yakki gara jabinaa dhaqqabuu agarsiisa jechuun qorannaan kun ibsa baaseen hubachiise.
Kana malees ijoollee looltummaaf funaanuu fi wal waraansa keessatti akka hirmaatan gochuu, akkasumas dubartoota bebbekamoo ta’an eessa butee isaanii dhabamsisuu fi seeraan ala ajjeesuun gagggeeffamaa ture jedha gabaasnii ba’e.
Gareen kun bara 2019 hundeeffame.
Gaazexxessaan Tasfaalam Woldayas Gadhiifamee
Gargaarsa Nyaataa Afaarii fi Amaaraatti Kan Raabsiine Ta’uus Kan Tigraay Keessaa Amma Iyyu Danqamaa Dha: WFP
Dhukkubni Saree Maraachu Itiyoophiyaatti Waggaatti Namoota Kumaan Lakkaawaman Ajjeesa, Jedhame
Faayidaa Dinagdee Irreecharraa Argamu Guddisuuf Hojjetaa Jirra, Jedha Waajirri Aadaa fi Tuuriizimii Bishooftuu